शेयर बजारमा अधिकांश समूह राताम्मे हुँदा यी फाइनान्स कम्पनीका शेयरधनीलाई १० प्रतिशत नाफा| Corporate Nepal
Friday, February 26, 2021 | शुक्रबार १४ फाल्गुन, २०७७
शेयर बजारमा अधिकांश समूह राताम्मे हुँदा यी फाइनान्स कम्पनीका शेयरधनीलाई १० प्रतिशत नाफा
माघ ६, २०७७ मंगलबार १५:३०
काठमाडौँ । साताको पहिलो र दोश्रो दिन दोहोरो अंकले बढेको शेयर बजार आज तेश्रो दिन भने झिनो अंकले घटेको छ । आइतबार २८.४६ र सोमबार १७.३१ अंकले बढेको बजार आज भने ५.५७ अंकले घटेको हो ।
नेप्से परिसूचक घटेपनि कारोबार रकम भने बढेको छ । आइतबार ६ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख ६७ हजार ७ सय ८२ रुपियाँ र सोमबार ६ अर्ब ३१ करोड ४६ लाख ६४ हजार १ सय ६६ रुपियाँ ५५ पैसा बराबरको शेयर किनबेच भएको थियो भने आज ७ अर्ब ४६ करोड ७४ लाख ३९ हजार ८ सय ४८ रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले जनाएको छ ।
नेप्सेका अनुसार आज ०.२४ प्रतिशतले बजार घट्दा परिसूचक २३२६.९० अंकमा झरेको छ । आज २०७ कम्पनीका १ करोड ६३ लाख ५ हजार १ सय ४१ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
बजार घटेको दिन आज अधिकांश समूह राताम्मे भएका छन् । ट्रेडिङ समूह, वित्त समूह र जीवन बीमा समूहमा भने हरियाली छाएको छ । आज जीवन बीमा समूहमा लगानीकर्ताहरु झुम्मिए । जीवन बीमा समूह सबैभन्दा बढी ५३५.६७ अंकले बढेको हो ।
आज प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड र गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडका शेयरधनीहरुले सबैभन्दा बढी १०-१० प्रतिशत नाफा कमाएका छन् ।
त्यसैगरी सपोर्ट लघुवित्तका शेयरधनीहरुले भने सबैभन्दा बढी ७.७४ प्रतिशतले घाटा ब्यहोरेका छन् । नेप्सेका अनुसार आज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको उच्च कारोबार भएको छ । नेपाल लाइफको ९१ करोड ९७ लाख ६ हजार ८ सय १ रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको हो ।
फागुन १४, २०७७ शुक्रबार
गणपति लघुवित्तको १५ प्रतिशत बोनस शेयरमा मूल्य समायोजन
पाँच सय रुपियाँले घट्यो सुनको मूल्य
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सले फागुन २३ गतेबाट आइपीओ बिक्री खुला गर्ने
महिला लघुवित्तको आइपीओ बाँडफाँड, यसरी हेर्न सकिन्छ
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको २१ प्रतिशत बोनस शेयरमा मूल्य समायोजन
फागुन १३, २०७७ बिहिबार
शेयर बजारमा पहिरोः चन्द्रागिरिका लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा बढी कमाए, निफ्राको कारोबार उच्च
फागुन ९, २०७७ आइतबार
८५ लाख १ हजार कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, बोनस कति र हकप्रद कति ?
फागुन १०, २०७७ सोमबार
४२ लाख ३५ हजार कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
तीन वाणिज्य बैंक र १ लघुवित्तको ३ करोड ३९ लाख कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कस्को कति ?
फागुन ११, २०७७ मंगलबार
संकटकालको गलत हल्लाले सेयर बजार प्रभावित भयो, हल्लाको पछि नलागौंः पौडेल
११ लाख ६० हजार कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कस्को कति ?
बीमा कम्पनीको १५ लाख ८१ हजार कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
१२ कम्पनीको ४ करोड ४९ लाख कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कस्को कति ?
आठ करोड एकाई कुमारी इक्विटी फण्ड बिक्री शुरु
इटहरीमा तीस करोडमा वाटर पार्क, प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीको पनि लगानी